Taa na akụkọ ihe mere eme: 15 August 1888 Deutsche Bank - RayHaber
HomeGeneralTaa na History: 15 August 1888 Deutsche Bank
15 / 08 / 2019 Levent Elmastaş General, Turkey, Taa na akụkọ ihe mere eme 0
Ụgbọ okporo ígwè Anatolian
15 August 1885 A ọkụ gbawara na Mersin-Adana ụgbọ okporo ígwè.
15 August 1888 Deutsche Bank General Siemens na-arụ ọrụ na Office German Foreign Office ma rịọ maka ọnọdụ ya na njem Anatolian Railway. 2 Septemba September 1888'de German na-aza arịrịọ maka mgbazinye ego, mana ọ hụghị nsogbu ọ bụla, ma kwukwara na ihe ize ndụ niile bụ Deutsche Bank.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 15 August 1888 General Manager nke Deutsche Bank Siemens, German ... 15 / 08 / 2012 15 August 1885 A ọkụ gbawara na Mersin-Adana ụgbọ okporo ígwè. 15 August 1888 Deutsche Bank General Siemens na-arụ ọrụ na Office German Foreign Office ma rịọ maka ọnọdụ ya na njem Anatolian Railway. 2 Septemba September 1888'de German na-aza arịrịọ maka mgbazinye ego, mana ọ hụghị nsogbu ọ bụla, ma kwukwara na ihe ize ndụ niile bụ Deutsche Bank.
Taa na History: 15 August 1888 General Manager nke Deutsche Bank Siemens, Germany Alman 15 / 08 / 2015 Akụkọ 15 August 1885 Mersin-Adana ụlọ ụgbọ okporo ígwè malitere ọkụ. 15 August 1888 Deutsche Bank General Siemens na-arụ ọrụ na Office German Foreign Office ma rịọ maka ọnọdụ ya na njem Anatolian Railway. 2 Septemba September 1888'de German na-aza arịrịọ maka mgbazinye ego, mana ọ hụghị nsogbu ọ bụla, ma kwukwara na ihe ize ndụ niile bụ Deutsche Bank.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 15 August 1888 Manazi nke Deutsche Bank ... 15 / 08 / 2016 Akụkọ 15 August 1885 Mersin-Adana ụlọ ụgbọ okporo ígwè malitere ọkụ. 15 August 1888 Deutsche Bank General Siemens na-arụ ọrụ na Office German Foreign Office ma rịọ maka ọnọdụ ya na njem Anatolian Railway. 2 Septemba September 1888'de German na-aza arịrịọ maka mgbazinye ego, mana ọ hụghị nsogbu ọ bụla, ma kwukwara na ihe ize ndụ niile bụ Deutsche Bank.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 15 August 1888 Manazi nke Deutsche Bank ... 15 / 08 / 2017 Akụkọ 15 August 1885 Mersin-Adana ụlọ ụgbọ okporo ígwè malitere ọkụ. 15 August 1888 Deutsche Bank General Siemens na-arụ ọrụ na Office German Foreign Office ma rịọ maka ọnọdụ ya na njem Anatolian Railway. 2 Septemba September 1888'de German na-aza arịrịọ maka mgbazinye ego, mana ọ hụghị nsogbu ọ bụla, ma kwukwara na ihe ize ndụ niile bụ Deutsche Bank.
Taa na History: 15 August 1888 Deutsche Bank 15 / 08 / 2018 Akụkọ 15 August 1885 Mersin-Adana ụlọ ụgbọ okporo ígwè malitere ọkụ. 15 August 1888 Deutsche Bank General Siemens na-arụ ọrụ na Office German Foreign Office ma rịọ maka ọnọdụ ya na njem Anatolian Railway. 2 Septemba September 1888'de German na-aza arịrịọ maka mgbazinye ego, mana ọ hụghị nsogbu ọ bụla, ma kwukwara na ihe ize ndụ niile bụ Deutsche Bank.
Ụkpụrụ Ụlọ Ọrụ EU na Deutsche Bahn na Deutsche Post 22 / 11 / 2013 EU Commission ruru Deutsche Bahn na Deutsche Post: ikpe megide ọchịchị Germany maka uru ndị na-ezighị ezi na-asọmpi site n'iji mmekọrịta dị n'etiti European Union (UN), Deutsche Bahn na German Postal Administration (Deutsche Post) gaa na steeti Òtù EU na-akọ na Ụlọ Ọrụ Gọọmentị Germany nwere ọganihu karịa ndị na-asọmpi ya site na mkpali na nkwekọrịta ndị isi obodo na-akwụ ụgwọ ya. Na nke a, a na-achọ ikpe na-ezighị ezi iji kwụọ ụgwọ, ma ego akwụ ụgwọ dị ala nke na-egosi na Commission, n'ihi ya, a kpọgawo akwụkwọ ahụ n'Ụlọikpe Ikpe nke Europe.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 12 August 1888 ka akpọtụrụ ndị Europe na ... 12 / 08 / 2017 Na History Today 12 August Ndị Board nke ndị nchịkwa nke 1869 Porthar Company ahapụwo ọrụ ụgbọ okporo ígwè Rumeli site na mkpebi mkpebi. A kọọrọ 16 mkpebi a na Porte na August. A kpọtụrụ 12 August 1888 na ụzọ ndị Europe na ụgbọ okporo ígwè mbụ si Istanbul ruo Vienna si na "Orient Express" a ma ama na Sirkeci. 12 August 1939 Payas-Iskenderun (19 kilomita) zigara na mgbakwunye nke Hatay.
Taa na History: 12 August 1888 European lines 12 / 08 / 2018 Na History Today 12 August Ndị Board nke ndị nchịkwa nke 1869 Porthar Company ahapụwo ọrụ ụgbọ okporo ígwè Rumeli site na mkpebi mkpebi. A kọọrọ 16 mkpebi a na Porte na August. A kpọtụrụ 12 August 1888 na ụzọ ndị Europe na ụgbọ okporo ígwè mbụ si Istanbul ruo Vienna si na "Orient Express" a ma ama na Sirkeci. 12 August 1939 Payas-Iskenderun (19 kilomita) zigara na mgbakwunye nke Hatay.
Taa na History: 28 February 1888 28 / 02 / 2012 28 February 1888 Hirsch 12 nyere otu nde franc n'ọnụ ụlọ akwụkwọ ndị Juu na Galicia. Mgbe e wuchara akwụkwọ Belova-Vakarel, ndị Bulgarian nwere Alaeze Ottoman, bụ nke jụrụ ọrụ ahụ.
Taa na History: 12 May - 4 July 1888 N'etiti ala Ottoman na Hirsch ... 12 / 05 / 2012 12 Ka Hey 4 July 1888 Jury kpebiri iji kwurịta ihe esemokwu n'etiti Alaeze Ottoman na Hirsch. Nzukọ ahụ emeghị mkpebi.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 15 August 1888 General Manager nke Deutsche Bank Siemens, German ...
Taa na History: 15 August 1888 General Manager nke Deutsche Bank Siemens, Germany Alman
Taa na akụkọ ihe mere eme: 15 August 1888 Manazi nke Deutsche Bank ...
Ụkpụrụ Ụlọ Ọrụ EU na Deutsche Bahn na Deutsche Post
Taa na akụkọ ihe mere eme: 12 August 1888 ka akpọtụrụ ndị Europe na ...
Taa na History: 12 August 1888 European lines
Taa na History: 28 February 1888
Taa na History: 12 May - 4 July 1888 N'etiti ala Ottoman na Hirsch ...